ग्याङस्टरको कथामा ‘षडङ्ग’, पार्ला त दर्शक दंग ? « Mazzako Online
ग्याङस्टरको कथामा ‘षडङ्ग’, पार्ला त दर्शक दंग ?
आगामी चैत १३ गतेदेखि प्रदशर्नको तयारीमा रहेको फिल्म ‘षडङ्ग’ को राजधानीमा पहिलोपटक बुधवार ट्रेलर, गीत र पोष्टर सार्वजनिक गरियो । फिल्मको पहिलोपटक औपचारिक कार्यक्रम राखिएको थियो जहाँ निर्देशक देखि कलाकारसम्मले फिल्मबारे आ–आफ्नो धारणा राखे ।
यस्तै फिल्मका अभिनेता अनुप बरालले फिल्मले षड्यन्त्र गरेर दर्शकलाई नतान्ने दाबी गरे । ‘अहिले कथित दुई धारका फिल्म बनाउने ट्रेन्ड सुरु भएको छ । केहीले बीचको बाटो फिल्म बनाउन थालेका छन् । षड्ङग यही बीचको सिनेमा हो जसले षड्यन्त्र गरेर दर्शकलाई चाहिँ तान्दैन’ उनले भने ।